Abenzi beTag kunye neeleyibheli | I-China iithegi kunye nelebheli yeFektri kunye nabaxhasi
Ukhuseleko lwempahla kwi-AM 58KHz Iimpawu zeAlarm Sensors Hard Tag-Tag Ipensile efanelekileyo
Ithegi yepensile eyi-Acute yinguqulelo emfutshane yeeTayile zePensile ezithandwayo. Inxeba le-ferrite coil inika amandla iMini-Stylus, ebonelela ngokusebenza ngokuthelekisiweyo kwiTag Tag. Le thegi ingasuswa kwintengiso kunye nayiphi na into enqabileyo.
Inombolo yemodeli: Iphepha lepensile eyi-Acute (No.018 / AM)
Uhlobo: I-AM Tag
Ukhuseleko lwempahla kwi-AM 58KHz Iimpawu zeAlarm Sensors-Mini Ipensile Tag
Ithegi engasebenziyo, enokuphinda isebenze engeyiyo yokuNamathela inikezela ngetekhnoloji ephezulu ye-AM EAS kuyilo olunzima lwethegi.Ukuyilwa koyilo lwangoku, olungamelaniyo kunye nokusetyenziswa ngokulula / ukususwa kwindawo yentengiso, le tag ye-ferrite yile ilungele ukukhusela iintlobo ezahlukeneyo zentengiso.
Inombolo yemodeli: Ithegi yePensile encinci (No. 001 / AM)
Ivenkile yeeMpahla ze-EAS Inkqubo yokuLwa neMagnetic Security Tag nge-Tag Tag-Ipensile kunye neLanyard
Idibanisa imisila yenkomo kunye nethegi kwenye. Ithegi efanelekileyo yezincedisi ezincinci. Akukho sidingo sokuthenga zombini iithegi kunye ne-lanyards ngokwahlukeneyo.Ukuyila uyilo lwangoku, olunganyangekiyo kunye nokusetyenziswa ngokulula / ukususwa kwindawo yentengiso, le thegi ye-ferrite ilungele ukukhusela iintlobo ezahlukeneyo zentengiso.
Inombolo yomzekelo: Ipensile kunye neLanyard (No. 008 / AM)
Ubukhulu: 55 * 13MM (2.16 ”* 0.51”) ene-135mm yenkomo yenkomo
I-EAS iimpahla ezingabizi kakhulu ngokuchasene nokubiwa kwedijithali yephepha lentengo ye-AM DR ilebheli yethegi ethambileyo
I-AM sheet Label inikezela uluhlu olukhethekileyo, uvelwano, ukuxhathisa ukuxhathisa, ukufumanisa. Olu luhlu lwephepha lihambisa ukusebenza okuphezulu kwe-line kunye nokukhuselwa kwempahla ephezulu xa unamathela kwimpahla.
Inombolo yemodeli: AM DR Ilebheli ethambileyo
Uhlobo: AM Label
Umbala: Ikhowudi yeBhari / emhlophe / emnyama